चिकित्सकहरूलाई मनोरञ्जन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
डाक्टरहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यस्तताबाट एकछिन पन्छिएर संसारसँग रमाउन चाहन्छन् ।
जेष्ठ १, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — मान्छे जुनसुकै पेसा–व्यवसायमा लागेको होस् या जुनसुकै क्षेत्रमा लागेर काम गरोस् । उसलाई मनको एक कुनामा रमाउने, हाँस्ने इच्छा रहिरहन्छ । मेडिकल डाक्टरहरू हरदम बिरामीको सेवामा खटिरहनुपर्ने अवस्थाबाट एकछिन भए पनि उन्मुक्ति लिएर मानवीय अनेक गुण र क्षेत्रका मान्छेसँग घुलमिल हुन, रमाउन चाहन्छन् ।
मान्छे मेसिन हुन सक्दैन, ऊसँग मानवीय गुण हुन्छ । त्यस अर्थमा डाक्टरहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यस्तताबाट एकछिन पन्छिएर संसारसँग रमाउन चाहन्छन् । बिरामीको टरटराहट व्यवहारदेखि आफूलाई अलग राखेर अरू थुप्रै कुरासँग परिचित हुन चाहन्छन् । मैले जीवनमा थुप्रै डाक्टरसँग संगत गर्ने मौका पाएँ । केही मेसिनजस्ता पनि पाएँ, जोसँग बिरामीसँग गर्ने मानवीय व्यवहारको गुण रति पनि छैन । जसले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दर्ताको मान्छे ठान्छ र अरूलाई मान्छेको व्यवहार गर्दैन । यस्ता डाक्टरसँग बिरामीले आफ्ना समस्या खेलेर राख्न सक्दैनन् । उनीहरूले बिरामीको समस्या ध्यान दिएर सुन्दा पनि सुन्दैनन् ।
डाक्टर र बिरामी बीचको सम्बन्ध यहाँनेर यसैकारणले बिग्रिने गरेको छ । मैले यस्ता डाक्टरसँग पनि संगत गर्न पुगेकी छु । जो आफूकहाँ आएका बिरामीको समस्या राम्रोसँग सुन्छ, उनीहरूको समस्या समाधानमा हरदम प्रयत्न गरिरहन्छ । उसले बिरामीको सेवामै आनन्द लिइरहेको हुन्छ । हुन त जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि असल र खराब हुन्छन् । हाम्रो नजर कहिल्यै असल कुराप्रति जाँदैन । जहिले–तहिले खराब कुराप्रति मात्र जान्छ । हाम्रो दिमागले पनि त्यही खराब कुरै सोच्छ र त्यही नकारात्मक दृष्टिकोण समाजमा छाड्छ । आज मेडिकल डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समाजमा राम्रो छैन । समाजले भन्छ, फलानाको छोरा वा छोरी डाक्टर पढेर त्यो पढेको खर्च नउठाई छोड्दैन ।
हुन पनि हो, प्राय: सबैजसो डाक्टरले आफ्नो निजी क्लिनिक यत्रतत्र सर्वत्र चलाइरहेकै हुन्छन् । बिरामीको सेवा गर्ने नाममा चर्काे फि असुलेकै हुन्छन् । यी निजी क्लिनिकहरूले पनि सबैले नराम्रो धन्दा गरिरहेका छन् । आशय यस पंक्तिकारको कदापि होइन । यी भित्र पनि राम्रा पक्षहरू छन् । राम्रा डाक्टर पनि छन्, तिनले साँच्चै सेवामूलक उद्देश्य लिएर खोलेका पनि छन् । मेडिकल डाक्टरसँग भएको अरू क्षेत्रका मान्छेसँग घुलमिल हुने चाहना, उनीहरूसँग भएको फरक खालको सोख या प्रतिभा उजागर गर्ने चाहना नजिकबाट जोकोहीले पनि बुझ्न गाह्रो छ । केही मान्छेले मात्र बुझ्न सक्छन् या उनीहरूको भावना ध्यान दिएर सुन्न सक्छन् । आत्मसात गर्न सक्छन् ।
डाक्टरले पनि केहीमात्र मानवीय व्यवहार गर्न सक्छन् । सच्चा सेवा गर्न सक्छन् । यसै प्रसंग कोट्याउँदा केही समय पहिले पंक्तिकारले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल डाक्टर र यिनका विद्यार्थी मिलेर गरेको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा सहभागी हुने मौका पाएकी थिई । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई निम्त्याइएर अनुभव सुनाउन लगाइयो । फरक क्षेत्रका व्यक्तिलाई एकैठाउँ भेटेर उनीहरूका अनुभव सुन्दा आनन्द लाग्यो ।
यस्ता कार्यक्रमले मान्छेलाई आनन्दमात्र दिने होइन, सबै क्षेत्रका मान्छेले एकअर्कामा घुलमिल हुन र आपसमा चिनजान हुन आफ्ना भावना साटासाट गर्न सजिलो हुन्छ, मेडिकल डाक्टरले सधैंको व्यस्तताबाट एकछिन भुलेर रमाउन पाउँछन् । मानसिक तनावबाट मुक्त हुने मौका पाउँछन् र बिरामीलाई दिने सेवा सहज र सरलसँग दिन सक्छन् । हामीकहाँ मेडिकल डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि भिन्नै छ । उनीहरू यन्त्र–मानव जस्तै हुन् यी जतिबेला पनि चल्न सक्छन् भन्ने खालको सोचाइ छ । हुन पनि हो, उनीहरू त्यस्तै पेसामा संलग्न छन् । रात भन्न पाउँदैनन्, दिन भन्न पाउँदैनन् । भोकतिर्खा भन्न पाउँदैनन् । तर उनीहरू पनि मान्छे हुन्, मान्छेमा हुने सबै गुण उनीहरूसँग छ । त्यसैले उनीहरूलाई पनि मानिसमा स्वस्थ हुन आवश्यक छ, मनोरञ्जनको आवश्यकता छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४५
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तोबाहेक अरू के देखाउँछ ?
जेष्ठ १, २०७५ डा. कमल लामिछाने
काठमाडौँ — नेपालमा कुनै विषयमा छलफल या बहस हुँदा मूलत: दुइटा धारहरूको प्रधानता देखिन्छ । पहिलो, कुनै व्यक्ति र विषयलाई अति राम्रो भनेर हाँमाहाँ मिलाउने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने । दोस्रो चाहिँ राम्रै हुनुका बाबजुद विरोधै गर्ने । अर्थात् अति राम्रो भनेर देवत्वकरण र नराम्रो भनेर दानवीकरण गर्ने ।
तर आवश्यक पर्नेचाहिँ कुनै पनि विषयप्रतिको तथ्यमा आधारित क्रिटिकल थिङ्किङ हो, जसको अभावमा खास विषय माथिको बहस बहकिन पुग्छ । जसलाई कसैसँग केही लेनदेन छैन र त्यो विषयसँग मात्रै सरोकार छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यो ‘क्रिटिकल ओपिनियन’ निर्माण र ‘क्रिटिसिजम’ गर्नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । यो यथार्थ चित्रणका लागि धेरै पर जानै पर्दैन, ३ वर्ष पहिलेको भारतीय नाकाबन्दीलाई नै हेरे पुग्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमा मोदी नेतृत्वको सरकारले अमानवीय नाकाबन्दी गर्‍यो । सत्तामा रहेको अहिलेको कमजोर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको उच्चारणसम्म गर्न सकेन । त्यस विरुद्ध बोल्दा केही स्वार्थ समूहलाई भारतको चाकडी नगरेकोमा ठूलै असर पर्ने भय थियो । तर कुनै बेला भारतको निकट भनी विशेषण लागेका र महाकाली सन्धिमा निकै मिहेनत गरेका केपी ओलीले जनताको आकांक्षा अनुसार नै नाकाबन्दीको खुलेरै विरोध गरे र जनसमर्थन ह्वात्तै आफ्नो दलतिर आकर्षण गर्न सफल भए । अहिले उनी सत्तामा रहनुको एउटा मुख्य कारण नै त्यही हो ।
हिजो नाकाबन्दी गर्दा चुँसम्म गर्न नसकेकाहरू आज मोदीको भ्रमणमा सरकारको विरोधमा उत्रनुलाई उनीहरूको चेत खुलेको रूपमा बुझ्न पाए त निकै राम्रो हुने थियो । तर तितो लागे पनि भन्नैपर्छ, त्यो चेत खुल्नुको सट्टा विपक्षीमै रहनुको छट्पटाहट सिवाय अरू केही होइन । सत्तापक्ष अति उत्साही भएर मोदीको स्वागतमा लाग्नु र विरोधका लागि नैतिक धरातलसमेत बाँकी नराखेको नेपाली कांग्रेससमेत यसपटक विरोधमा उत्रनुले के स्पष्ट पार्छ भने यिनीहरू अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आफ्नो हित अनुसार गिलथिल्याउने दुष्प्रयत्नद्वारा निर्देशित छन् । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण विरोध र वाक् स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका बाबजुद जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसका ब्यानरहरू नदेख्ने सरकारले चाहिँ काठमाडौंमा ‘मोदीलाई स्वागत छ, तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं’ भनी लेखिएको ब्यानरलाई समेत सहन सकेन ।
नाकाबन्दी हटेपछि यसै पत्रिकामा मैले २०७२ फागुनमा ‘खुलेको नाका र नखुलेको होश’ भन्ने स्तम्भ लेखेको थिएँ । उक्त स्तम्भमा यदि २०७२ सालको नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिकिएन अनि चीन र भारत दुवैसँग पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिएन भने त्यसले भारतलाई आफ्नो इतिहास दोहोर्‍याउन प्रेरणा मिल्दा नेपाललाई भने अनुभवबाट नसिकेकोमा केवल अहिलेजस्तै पश्चाताप मात्रै हुनेछ भनी उल्लेख गरेको थिएँ । आज त्यसको २ वर्ष बितिसक्दा नेपाल र विश्वकै राजनीतिमा उल्लेख्य बदलाब आइसकेको छ । हामी ३ चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थिर सरकारसहित विकासमा अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस बीचमा पटक–पटक भारत र हाम्रा बीचमा भ्रमणहरू आदान–प्रदान भएका छन् । तैपनि उनीहरूले नत नाकाबन्दी भुल थियो भनी बुझिनेगरी स्वीकार गरेका छन्, न भविष्यमा पुन: नाकाबन्दी नहुने सुनिश्चित नै गरेका छन् ।
मैले उक्त स्तम्भमा लेखेझैं कुनै पनि घटना बिर्सनुका पछाडि निरन्तर नयाँ जानकारीले दिमागमा ठाउँ लिएको र अतितको पुनरावृत्ति नभएको हुनुपर्छ । तर विगतमा घटेका जस्तै घटनाहरू वर्तमानमा पनि बारम्बार घटिरहने अनि तिनलाई विस्थापित गर्ने सकारात्मक, फरक खालका घटना तथा जानकारी देखानपर्दा हामीले नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं भन्नुमा कुन त्यत्रो अपराध थियो र सरकारले खास दलको कार्यालयबाटै ब्यानर हटाउनुपर्‍यो ? भारत नेपालको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आधारहरू तयार भए भनिँदैछ । तर त्यो मापन केले गर्ने त ? दुई राष्ट्रका नेतृत्वको बोलीलाई मात्रै हेर्ने हो भने त हाम्रा बीचमा असमझदारी नै थिएनन् र छैनन् भनिदिए हुन्छ ।
व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रा बीचमा यथेष्टै सानादेखि ठूला समस्या छन् । उनीहरू नेपालका सबैजसो परियोजना ओगटेर राख्ने रणनीति अनुसार सहमति र सम्झौता गर्न हतारिने तर कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नै चाहेका छैनन् । हरेक भ्रमणमा महाकालीको चर्चा हुन्छ, तर पूरा हुँदैन । एकातिर सबैजसो परियोजनालाई अलमल्याउने र अर्कातिर उनीहरूसँग सम्झौता भएका परियोजना बाहेकबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने अभिप्रायले ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको भट्याउँदा लज्जाबोध बाहेक अरू केही हुँदैन । हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा, डुबान र सीमा समस्याका अलावा किसानले दु:ख गरेर उब्जाएको अदुवा, अलैंची कुहिने अवस्था यथावतै छ । कतिसम्म भने भूकम्पबाट थलिँदा उनीहरूले घोषणा गरेको सहयोगसमेत पाउनसकेका छैनौं ।
यस्तै फेहरिस्तहरू प्रस्तुत गर्दैगर्दा छिमेकीप्रति म अलि बढी पूर्वाग्रही भएझैं पनि लाग्ला । तर खोइ किन हो, नेपालमा यसपटक मोदीले दिएका मन्तव्यहरू मिठा शब्द बाहेक मनैबाट आएको भावना हो भनी विश्वास गर्न सकिहाल्ने स्थिति छैन । मिठो बोल्न तर राम्रो नर्गन उनी कति माहिर रहेछन् भन्ने बुझ्न उनले हाम्रो संसद्मा दिएको ओजनदार मन्तव्य र त्यसपछिका क्रियाकलाप तथा यस पटकको उनको लवजलाई हेरे पुग्छ ।
एकातिर नेपालको स्वाभिमान सगरमाथाभन्दा उच्च छ भन्ने र अर्कातिर त्यही स्वाभिमान गिराउने दुष्प्रयासको रूपमा नाकाबन्दी गर्ने उनीहरूको बोली र व्यवहारमा तादत्म्यता कतै भेटिँदैन । यस्ता समस्या यथावतै रहँदा भारतले नेपाल सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्दैछ भनी स्वयं नेपालबाटै एकपक्षीय हौवा जसरी पिट्न खोजिँदैछ, त्यहाँ अपरिपक्वता त झल्कन्छ नै, उनीहरूको ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा छ भन्ने आभास गरिहाल्ने स्थितिसमेत छैन । यसको आशय के नलागोस् भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नै हुन्थेन ।
छिमेकीहरूका बीचमा भ्रमण आदान–प्रदान त हुन्छन् नै, तर यसपटक जुन रूपमा तयारी र तामझाम गरियो, त्यो अलिकता भद्दा र मजाकजस्तो महसुस भएको मात्रै हो । हामी उनीहरूबाट पीडित थियौं । पीडितका प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन र पीडा बिर्साउन उनीहरूले दिएको सम्मानको बदलामा पीडकलाई पनि खास योगदानबिनै २/२ पटक नागरिक अभिनन्दन गर्नुपर्छ भन्ने मान्न धेरै नेपाली अनिच्छुक रहेको सामाजिक सञ्जाल र काठमाडौंको ब्ल्याक आउटबाटै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनको भ्रमणमा प्रदेश २ मा ५० हजार मान्छे उतार्नेगरी भएको उर्दी र सार्वजनिक बिदाको आवश्यकतालाई कसरी बुझ्ने ? साथै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तो बाहेक अरू के देखाउँछ ? त्यसैगरी यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतमा कहिल्यै महसुस नगरिएको उनीहरूकै सुरक्षाबलको खुल्ला उपस्थिति देखियो । विश्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि क्रियाशील र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्न सफल नेपाली सेना के एउटा छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न अक्षम थियो त ?
अन्त्यमा, थुप्रै यस्ता सवाल अनुत्तरितै रहेको सन्दर्भमा के भुल्नु हुँदैन भने बलिया छिमेकीहरू कूटनीतिका अनेक अभ्यास गर्छन् र त्यो अनेक चरणबाट गुज्रन्छ । उनीहरू पहिले फकाउँछन्, नभए धम्क्याउँछन् र त्यतिले पनि नभए फेरि एकपटक पहिलेकै फकाउने प्रयासमा फर्कन्छन् । पहिलो चरणको फकाइमा नफकिएर धम्क्याइमा पनि खुट्टा नकमाएकाहरूले फकाउने तेस्रो पटकको प्रयासलाई नबुझेर कोर्स करेक्सनका रूपमा अथ्र्याए भने ठान्नुपर्छ, उनीहरू हामीमाथि पुरानै रवैया लागू गर्न सफल हुँदैछन् । अहिले नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धमा उनीहरू त्यही तेस्रो चरणबाट गुज्रेझैं लाग्छ । यो कूटनीतिलाई नेपालले बुझेर उनीहरूसँग खुला रूपले कुराकानी गर्ने अनि अवाञ्छित क्रियाकलाप तथा सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई अस्वीकार गर्‍यो भनेमात्रै उनीहरू नचाहेरै चौथो चरणमा पुग्छन् र त्यो नै हामीले चाहेको ‘कोर्स करेक्सन’ हुनेछ ।